Praiminisitra Ntsay Christian : « Laharam-pahamehana ny fifidianana » -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Ntsay Christian : « Laharam-pahamehana ny fifidianana »
15/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notanterahina omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, ny filankevitry ny governemanta voalohany notarihin’ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, Ntsay Christian.
Taorian’izay dia nitafa tamin’ny mpanao gazety ny praiminisitra. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa mitaky fandraisana andraikitra ny krizy misy eto amin’ny firenena. “Ny fahasahiana mandray andraikitra indrindra no nanekeko ny fitondrana ny governemanta. Izay foto-pisainana izay ihany koa no tokony hananan’ireo tompon’andraikitra maro isan-tsokajiny avy, indrindra tompon’andraikitra ara-politika, satria ny firenena dia mila fitoniana”, hoy ny praiminisitra.
Notsindriany ihany koa fa laharam-pahamehan’ny governemanta izay tarihiny, dia ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin’ny fitoniana sy ny filaminana. Fifidianana madio sy mangarahara, ary eken’ny rehetra ka ireo vondrona politika dia tokony handray andraikitra hampisy ny fitoniana. Noho izay indrindra, hoy izy, dia ilaina ny fifampihainoana anatin’ny fifampiresahana hahatongavana amin’izay fitoniana sy filaminana izay.
Ankoatra izay, dia nanambara ny praiminisitra fa maika ny fifampiresahana eo amin’ny governemanta sy ny Ceni mba ahafahana mamoaka faran’izay haingana ny datim-pifidianana. Manome toky anareo ny tenako fa ny governemanta izay tarihiko dia hametraka ho laharam-pahamehana amin’ny fotoana fohy dia fohy ny datim-pifidianana mba ahafahan’ny Malagasy rehetra miomana”, hoy izy.
Etsy andaniny, voalaza fa hanamafy ny fandriam-pahalemana eto amin’ny firenena ihany koa ny governemantan’ny marimaritra iraisana.
RN44 : Basy mahery vaika miisa 08 tra-tehaka
Noho ny ezaka nataon’ny zandary sy ny polisy any amin’iny faritr’Ambatondrazaka iny, tao aorian’ny fanafihana teny amin’ny lalampirenena faha- 44 farany teo, dia basy mahery vaika miisa valo no saron’izy ireo. Nahitàna basy Mac 36, ...Tohiny
Vao andro voalohany:6 , 4 MILIARA DOLARA
Fifamoivoizana eto an-drenivohitra:HENTITRA NY FAMPIHARANA NY LALANA